China Yakaderera Vhoriyamu yezvokurapa pcb SMT Assembly vagadziri uye vanotengesa | Kangna
SMT chidimbu cheSurface Yakakwira Tekinoroji, inonyanya kufarirwa Technology uye maitiro muindastiri yegungano indasitiri. Elektroniki redunhu Surface Mount Technology (SMT) inonzi Surface Mount kana Surface Mount Technology. Iyo mhando yeCircuit gungano tekinoroji iyo inoisa isina lead kana ipfupi inotungamira pamusoro pegungano zvikamu (SMC / SMD muchiChinese) pamusoro pePrinted Circuit Board (PCB) kana imwe substrate pamusoro, uyezve welds uye inoungana nenzira yeRewlow Welding kana Dip nomoto.
Kazhinji, zvigadzirwa zvemagetsi zvatinoshandisa zvakagadzirwa nePCB pamwe nemhando dzakasiyana dzemagetsi, zvinodzivisa uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi zvinoenderana nedhiraundi redunhu, saka ese marudzi emidziyo yemagetsi anoda akasiyana SMT chip kugadzira tekinoroji kuti iite.
SMT yakakosha maitiro enzira anosanganisira: kudhinda kwechidzitiro (kana kugovera), kukwirisa (kurapa), kuwedzeredza kuwelding, kuchenesa, kuyedza, kugadzirisa.
1.Screen yekudhinda: Basa rekudhinda kwechidzitiro kudonhedza pasoda yekunamatira kana chigamba chinonamatira pane iyo PCB's solder pad yekugadzirira iyo yekumonera kwezvinhu. Iyo michina inoshandiswa iscreen yekudhinda muchina (skrini yekudhinda muchina), iri kumberi kwekupedzisira kweSMT yekugadzira mutsara.
2. Glue spraying: Inodonhedza glue kune yakamisikidzwa chinzvimbo chePBB board, uye basa rayo guru kugadzirisa zvikamu kubhodhi rePCBB. Iyo michina inoshandiswa ndiyo yekupa muchina, iri kumberi kwekupedzisira kweSMT yekugadzira mutsara kana kuseri kwemidziyo yekuyedza.
3. Gomo: Basa rayo nderekuisa zvikamu zvegungano repamusoro nenzira chaiyo kune yakatarwa chinzvimbo chePCB. Iyo michina inoshandiswa ndeye SMT yekuisa muchina, iri kuseri kwechidzitiro yekudhinda muchina mune iyo SMT yekugadzira mutsara.
4.Kurapa: Basa rayo ndere kunyungudusa iyo SMT yekunamira kuitira kuti pamusoro pegungano zvikamu uye pcb bhodhi inogona kusimbiswa zvakanamatira pamwechete. Iyo michina inoshandiswa kurapa vira, iri kumashure kweSMT SMT yekugadzira mutsara.
5. Reflow Welding: mashandiro e Reflow Welding ndeyekunyungudutsa iyo solder namatidza, kuitira kuti pamusoro gungano zvikamu uye pcb bhodhi rakasimba rinonamira pamwechete. Iyo midziyo inoshandiswa ndeye kudzora moto wevira, iri mune iyo SMT yekugadzira tambo kuseri kweSMT yekuisa muchina.
6.Kuchenesa: Basa racho ndere kubvisa zvisaririra zvemoto zvakaita sekuyerera paPCB yakaungana iyo inokuvadza muviri wemunhu. Iyo michina inoshandiswa ndeye yekuchenesa muchina, iyo nzvimbo haigone kugadziriswa, inogona kuve online, kana kwete online.
7. Kuziva: Iyo inoshandiswa kuona mhando yehuremu uye mhando yegungano rePCB yakaungana. Midziyo inoshandiswa inosanganisira girazi rinokudza, maikorosikopu, chimbo chekuyedza pamutsetse (ICT), chimbo chekuyedza nhunzi, otomatiki kuongorora (AOI), X-ray yekuyedza system, chishandiso chekuyedza, nezvimwe. Iyo nzvimbo inogona kugadzirirwa mune yakakodzera chikamu chemutsara wekugadzira zvinoenderana nezvinodiwa pakuongorora.
8.Repair: inoshandiswa kugadzirisazve pcb iyo yakaonekwa iine zvikanganiso. Iwo maturusi anoshandiswa ndeaya ekunamatira simbi, ekugadzirisa nzvimbo dzekushandira, nezvimwewo kumisikidzwa kuri chero mumutsara wekugadzira.
Pashure: imwe chete mativi kunyudzwa goridhe Ceramic yakavakirwa Bhodhi
Zvadaro: inokurumidza shanduka prototype yegoridhe yakanamirwa pcb ne Counter sink hole